MUQDISHO, Soomaaliya - Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa codsatay in dhaqaalaha laga joojiyo Somaliland, sida laga soo xigtay qoraal uu Wasiirka Qorsheynta, Jamaal Maxamed Xasan u qoray Deeqbixiyaasha Beesha Calaamka.
Qoraalkaan oo uu helay Warisdaha Garowe Online, ayaa sidoo kale, waxay kaloo dowladda Soomaaliya ay ku diiday inay cusbooneysiiso heshiis saami ku siinayey Somaliland deeqaha laga helo Beesha Caalamka.
Sababaha ayaa waxaa qeyb ka ah, inay wiiqeyso guud ahaan; inuu wiiqayo in Soomaaliya laga hir-geliyo nidaamka Federaalka, in waxyaabo kale oo loo adeegsado iyo Somaliland ku dhiiro gelineyso inay kasii go'ado dalka.
Somaliland ayaa waxay shaacisay inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dalka, laakiin wali ma aysan helin aqoonsi caalami ah, oo ay ku noqon karto dowlad madax banaan.
Balse, warkaan hadda kasoo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu imaanayaa iyadoo maamulka Hargeysa uu saaran yahay culeysyo kala duwan oo uga imaanaya gudaha iyo waliba caalamka.
Wali ma jiro jawaab ay Somaliland ka bixisay qoraalkaan, laakiin, xiriiro uu Warisdaha Garowe Online la sameeyay Madaxtooyadda Somaliland si ay uga jawaabaan nooma aysan suura gelin.
HOOS KA AKHRI QORAALKA WASIIRKA: